Mashruuca 25 mashruuc sawir fikradeed oo ka hadlaya kalluunka | Abuurista khadka tooska ah
Pablo Gonder | | Fanaaniin, muujiye, Dhiirrigelinta
Sawirka fikirka que busca ku ciyaar fikradaha iyo sawirada qaab ah in ay macquul tahay in la abuuro a xiriir xariif ah inta udhaxeysa sawirada. Mashruucan sawirada leh wuxuu ina tusayaa a sawir muuqda ku ciyaara farsamooyin kala duwan, laga bilaabo sawir qaadista illaa sawir dijitaal ah.
Mashruucu waa heer sare jimicsi hal abuur leh taas waxaa samayn kara farshaxan kasta ama naqshadeeye kasta oo raba inuu hal-abuurnimadiisa imtixaanka geliyo. Fikradda ayaa ah ka fikir fikrad oo raadi sida looga hadlo fikraddaas adigoon si toos ah u muujin, ku ciyaar sawirada iyo macnaha aad leedahay.
Mashruuca sawirka fikradda ah
Mashruuca ayaa kor u qaadaya fikradda "kalluunka" oo ah barta bilowga ah ee lagu abuurayo dhammaan waxyaabaha garaafka ku saleysan eraygan. Lagu ciyaarayaa sifooyinka fikradda, siyaabaha, fikradaha iyo dhammaan noocyada cilaaqaadka xiisaha leh ee looga hadlo fikraddaas iyada oo aan la samayn.
Dhamaanteen waan ognahay taas kalluunku wuxuu leeyahay xusuus gaabanTani waa sababta fikradda ah eber xusuusta loo adeegsaday inay matalaan xiriirka ugu horreeya ee fikradda kalluunka. Sida aan ku arki karno sawirka hoose, qeybta muuqaalka ee sawirka ayaa sidoo kale la ciyaaray, sidoo kale waxaa loogu talagalay inay noqoto soo jiidasho leh laakiin aan la taaban karin. Xaaladdan oo kale, weedha caanka ah ayaa la ciyaarayaa "Waxaad leedahay xusuusta kalluunka"
Sawirka soo socda waxaan ku arki karnaa sida sawirku noo tusayo boodhadhka filimka caan ah, kiiskan waa ereyo ku ciyaar iyo cinwaanka filimka si looga hadlo fikradda kalluunka iyadoo aan la sameyn.
Sawirka soo socda waxaan ku aragnaa sida fikradda badda qaab caalami ah oo leh fikradda kalluunka, xaaladdan oo kale baddu waa weel ay ku nooshahay kalluunku. Jaantuskan sawirku waa mid aan la taaban karin oo ina tusinaya fikradda meelaynta kalluunka badda hoosteeda.
Iskuul kalluun waxay noqon kartaa waxyaabo badan, waxay noqon kartaa iskuul kalluun ama dugsi caadi ah oo kalluun leh. Sawirkaani wuxuu la ciyaarayaa xiriirka erayga bangiga (kursiga) iyo iskuulka (kalluunka), oo muujinaya iskuul caadi ah oo qaab aan la taaban karin ah.
Mashruucani waa hab fiican oo loo maro tababarro hal-abuurkeenna hab baashaal ah oo ka duwan, habka ugu habboon ayaa ah raadso fikrado badan oo iyaga matala iyaga oo adeegsanaya qaabab kala duwan.
Hadaad rabto inaad aragto sawirro badan mashruucan waad sameyn kartaa aquí.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Mashruuca 25 mashruuc sawir fikradeed
Adobe wuxuu bilaabayaa qorshaha Adobe XD ee bilaashka ah sidaa darteed waxaad haysataa aaladaha naqshadeynta ugu fiican